Uwubaleka njani uKhuphiswano lukaFacebook (iNyathelo ngeNyathelo) | Martech Zone
Ubaleka kanjani ukhuphiswano lwe-Facebook (Inyathelo-ngeNyathelo)
NgoLwesibini, nge-17 kaDisemba ngo-2019 NgoLwesibini, nge-17 kaDisemba ngo-2019 Douglas Karr
Ukhuphiswano lwe-Facebook sisixhobo sokuthengisa esingaphantsi. Banokuphakamisa ulwazi ngophawu, babe ngumthombo womxholo owenziwe ngumsebenzisi, bandise ukubandakanyeka kwabaphulaphuli, kwaye benze umahluko obonakalayo kuguquko lwakho.
Ukuqalisa ukhuphiswano lweendaba loluntu olunempumelelo ayisiyonto inzima yokwenza. Kodwa ifuna ukuqonda iqonga, imigaqo, abaphulaphuli bakho kunye nokwenza isicwangciso sekhonkrithi.
Ngaba kuvakala njengomzamo omkhulu kumvuzo?
Ukhuphiswano oluyilwe kakuhle nolwenziwe kakuhle lunokwenza imimangaliso yophawu.
Ukuba unomdla wokuqhuba ukhuphiswano lwe-Facebook, nantsi inyathelo ngenyathelo ngenyathelo lokuqhuba umkhankaso ophumeleleyo.
Inyathelo 1: Thatha isigqibo ngeNjongo yakho
Ngelixa ukhuphiswano lwe-Facebook lunamandla, ukuthatha isigqibo sokuba yintoni kanye oyifunayo kukhuphiswano lwakho kuya kukunceda ungazi ukuba abo bangenayo bazakubhalisa njani, bafumane liphi ibhaso, kwaye ulandele njani emva kwephulo.
Iinjongo ezahlukeneyo zinokubandakanya:
Umxholo okwenziwa ngumsebenzisi
Ukwandisa ukunyaniseka kwabathengi
Ngakumbi ukugcwala kwesiza
Ukwanda kolwazi lwebrand
Abalandeli abaninzi beendaba zentlalo
Uyilo olwenziwe kakuhle Ukhuphiswano lwe-Facebook inokukunceda ukubetha ngaphezulu kwethagethi enye, kodwa kuhlala kulungile ukuba unoluvo oluphambili engqondweni ngaphambi kokuqala umkhankaso wakho.
Xa usebenza kuyo yonke enye into-indlela yokungena, imigaqo, uyilo, ibhaso, ikopi kwiphepha-gcina injongo yakho ephambili engqondweni kwaye uyijolise kuloo nto.
Inyathelo 2: Fumana iinkcukacha ezantsi! Abaphulaphuli ekujoliswe kubo, uhlahlo-lwabiwo mali, ixesha.
UMtyholi ukwinkcukacha xa kufikwa kukhuphiswano loyilo.
Nokuba ulungile kangakanani umvuzo wakho okanye lukhulu kangakanani uhlahlo-lwabiwo mali, ukuba uyasilela ukucinga malunga nezinto ezisisiseko, kunokukuchitha ixesha elininzi usendleleni.
Cwangcisa ibhajethi ayisiyiyo ibhaso lakho kuphela, kodwa nexesha olichithayo kuyo, isixa semali oyakusebenzisa ukuyikhuthaza (kuba iya kufuna ukukhuthazwa ukukhupha igama), kunye nazo naziphi na izixhobo ze-intanethi okanye iinkonzo onazo ' Ndiza kusetyenziswa ukunceda.
Ngokubanzi, ukhuphiswano oluqhutywa ngaphantsi kweveki aludingi ukufikelela kubuninzi babo ngaphambi kokuphela. Ukhuphiswano oluqhuba ixesha elingaphezu kweenyanga ezimbini ludla ngokuphelisa kwaye abalandeli baphulukane nomdla okanye balibale.
Njengomgaqo oqhelekileyo wesithupha, sihlala sicebisa ukubaleka ukhuphiswano iiveki ezi-6 okanye iintsuku ezingama-45. Oko kubonakala njengendawo emnandi phakathi kokunika abantu ithuba lokungena, kwaye ungavumeli ukhuphiswano lwakho ukuba luphume okanye luphulukane nomdla.
Okokugqibela, cinga ngokubaluleka kwamaxesha onyaka. Umzekelo i-surfboard enikezelwayo ayinamathuba okutsala abangenayo ekufeni kobusika.
Inyathelo 3: Uhlobo lwakho loKhuphiswano
Iindidi ezahlukeneyo zemincintiswano zilunge ngakumbi kwiindidi ezahlukeneyo zeenjongo. Umzekelo, ukufumana umxholo owenziwe ngumsebenzisi, ukhuphiswano lwezithombe zezona zibalaseleyo zokubheja kwakho.
Uluhlu lwee-imeyile, ukungena ngokukhawuleza zezona zisebenzayo. Ukuba ufuna ukukhulisa uthethathethwano, ukwenza ukhuphiswano lwamagama ngamagama ayindlela eyonwabisayo yokufumana abaphulaphuli bakho abanobukrelekrele bedlala kunye negama lakho.
Ngezimvo, Nazi ezinye zeendidi zokhuphiswano onokuziqhuba:
Inyathelo 4: Thatha isigqibo malunga nendlela yokuNgena kunye neMithetho
Oku kuya kubaluleka kakhulu, njengoko kukho izinto ezimbalwa eziphazamisa abasebenzisi ngaphezu kokuziva bekhohlisiwe kukhuphiswano kuba bengayiqondi imithetho.
Abangeneleli abaphoxeke kakhulu banokubonakalisa ukonwaba kukhuphiswano lwamajelo eendaba, kwaye banokuthumela iingozi zomthetho ezinokubakho ukuba aziphendulwanga ngokuchanekileyo.
Nokuba yeyiphi na indlela yokungena okanye imigaqo-ubhalisa nge-imeyile, ukuthanda iphepha lakho, ukuhambisa ifoto kunye negama-magama, uphendula umbuzo-qinisekisa ukuba zibhaliwe ngokucacileyo kwaye ziboniswa ngokucacileyo apho abangenayo banokubona khona.
Kuyanceda ukuba abasebenzisi bayazi ukuba baphumelele njani abaphumeleleyo, kunye nosuku abanokulindela ukwaziswa ngalo (ngakumbi ukuba ibhaso likhulu, uyakufumanisa ukuba uluntu lunokuba nexhala lokuva isibhengezo esiphumeleleyo.)
Qiniseka ukuba ulandela imigaqo yeqonga ngalinye kunye nezikhokelo. I-Facebook inayo setha imigaqo ukulungiselela ukhuphiswano nokwenyusa kwiqonga layo. Umzekelo, kuya kufuneka uchaze ngokucacileyo ukuba eyakho Unyuso aluxhaswanga nangayiphi na indlela, alugunyaziswanga, alawulwanga okanye lunxulunyaniswa neFacebook.
Jonga imigaqo-nkqubo kunye neminye imiqobo, kwaye uqiniseke ukuba usesikhathini kunye nezikhokelo zamva nje ngaphambi kokumiliselwa.
Iphupha elikhawulezayo: Ngoncedo lokwenza imigaqo yokhuphiswano, jonga iWishpond's imithetho yasimahla kukhuphiswano wenkunkuma.
Inyathelo 5: Khetha ibhaso lakho
Unokucinga ukuba ibhaso lakho elikhulu okanye elihamba phambili, lingcono, kodwa akunjalo.
Ngapha koko, ixabiso lakho libiza kakhulu, kokukhona kunokwenzeka ukuba utsale abasebenzisi abaya kungenela ukhuphiswano lwakho ngenxa yebhaso, kwaye bangazibandakanyi negama lakho emva kokhuphiswano.
Endaweni yoko, kungcono ukhethe ibhaso elungelelaniswe ngokusondeleyo negama lakho: iimveliso zakho okanye iinkonzo, okanye indawo yokuthenga ezivenkileni. Oku kuyakuthetha ukuba ungoyena mntu unokufumana abangeneleli abanomdla wokwenene kwinto oyifunayo.
Umzekelo, ukuba ungumkhwa wobuhle obonelela nge-iPhone yamva nje ngesipho, uya kuthi ufumane uninzi lwabangenayo, mhlawumbi ngaphezulu kunokuba unikezela nge-makeover yasimahla okanye ngokubonisana.
Kodwa bangaphi abangenayo kwiqela lokuqala abanokuhlala abalandeli okanye ababhalisile emva kokuba umnikelo wakho uphelile, okanye kunokwenzeka ukuba bajike babe ngabathengi bexesha elide?
Kulula ukuphazamiseka ngamanani amakhulu kunye namabhaso amakhulu, kodwa ukucinga ngobuchule yeyona ndlela yokufumana okona kuninzi kukhuphiswano lweendaba zosasazo-ezinkulu azisoloko zingcono, kodwa umkhankaso ojolise ekucingeni awuzukuchitha.
Ukufunda ngakumbi xa ukhetha umvuzo wakho, funda:
Iimbono ezili-101 zeMbasa eziBalaseleyo zokuNikezela kude kukhuphiswano lwe-Intanethi kunye noKhuphiswano
Iingcamango ezi-50 ezinokuhlawulekayo onokuzisebenzisa namhlanje
I-5 yexabiso eliphantsi lokufumana amaBhaso oKhuphiswano aNgachasanga iiOds
Inyathelo 6: Ukunyusa kwangaphambili, ukuSungula kunye nokuPhucula!
Ngokugqibeleleyo isicwangciso sokuthengisa kufuneka ibandakanye indawo yokwazisa ukhuphiswano.
Kwimpembelelo ephezulu, abaphulaphuli kufuneka balazi ukhuphiswano ngaphambi kokuphehlelelwa, ngethemba lokuba, bonwabile ngethuba lokungena kunye nokuphumelela.
Izimvo zokwazisa kwangaphambili zibandakanya:
Ukuthumela ileta yeendaba nge-imeyile kubabhalisi bakho
Ukunyusa ukhuphiswano lwakho kwiibhola ezisecaleni okanye kwiipops kwiwebhusayithi yakho
Unyuselo kumajelo eendaba ezentlalo
Nje ukuba ukhuphiswano lwakho luqhubeke, ukunyusa kwakho kufuneka kuqhubeke ukuqengqeleka ukugcina isantya
Isibali-xesha esibala emva sinceda ukwandisa imeko yakho yongxamiseko, kunye nokukhumbuza abantu ngebhaso lakho kunye nexabiso lalo.
Ngaphezulu, funda Iindlela ezi-7 zokuKhuthaza ngokukuko uKhuphiswano lwakho lweFacebook.
Inyathelo 7: Thatha amanqaku
Njengayo nayiphi na into, eyona ndlela ingcono yokuqhuba ukhuphiswano kukungena nje apho kwaye uqalise ukuyenza: funda kubaphulaphuli bakho nakwiqela lakho ukuba yeyiphi eyona nto ikusebenzayo kunye nengasebenziyo.
Yenza amanqaku ngenkqubo kunye neendawo zokuphucula ukuze ungaziphindi iimpazamo ezifanayo.
Kwaye okokugqibela, kodwa okona kubaluleke kakhulu - wonwabe! Kukhuphiswano oluqhutywa kakuhle, abaphulaphuli bakho bayazibandakanya, kwaye nawe kufanelekile ukuba ubekho. Yonwabela abalandeli bakho abatsha kunye neenombolo ezintsha: uzizuzile!
Ngaba uziva uphefumlelwe? Akukho siphelo kuhlobo lokhuphiswano onokuluqhuba: ividiyo, ifoto, ukuhanjiswa, ibhodi yabaphambili kunye nokunye. Ngaba uziva uphefumlelwe? Intloko kwiwebhusayithi yeWishpond ngaphezulu! Isoftware yabo yokuthengisa yenza kube lula ukuyila kunye nokuqhuba ukhuphiswano olunempumelelo, kunye nokulandelela uhlalutyo kunye nokuzibandakanya.
tags: ukhuphiswano lwe-facebook
Imithombo yeendaba yeNtlalo yeSikhokelo soBume be2020